Ungayikhetha njani into efanelekileyo yokuguquguquka kwezinto eziphilayo?
1. Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uthenga izinto eziguqukayo ze-organic plugging kwi-intanethi? Indlela yokwenza ukhetho olufanelekileyo? Ukuthengwa kwe-Intanethi kwezinto eziguquguqukayo zokufaka izinto kuthetha ukuba imveliso ithengiwe kwiwebhusayithi yomzi mveliso. Ke ngoko, kukho ezinye ezifanelekileyo ...
Imodyuli yokuthintela umlilo i-Wei Cheng ukwenza i-firewall ekhuselekileyo, sinokwenza ngcono
Njengohlobo olutsha lwezinto zokufaka iplagi, imodyuli egcina umlilo ngokukhawuleza yathatha ukuphakama kokuyalela kokufakwa kwezinto kwaye yaba yenye yezentengiso kwintengiso yezinto zokwakha. Ukuzalwa kwemodyuli ebaleka umlilo yenze ukuba izixhobo zokupla zemveli zilahlekelwe ngumbala, ...
"Ukwandiswa" kwephakheji yokulinda umlilo izisa ukhuseleko oluphezulu kuthintelo lomlilo
Kwiminyaka yakutshanje, urhulumente uhlawule ngakumbi nangakumbi kuthintelo lomlilo lweeprojekthi zokwakha, kwaye inani elikhulu lezinto zokuthintela umlilo ziye zasetyenziswa kulwakhiwo lobunjineli. I-db-a3-cd01 ibhegi egcina umlilo luhlobo olutsha lwenkxaso yobungqina bomlilo ...
Ukubala njani inani lesicelo sekhebhu yomlilo egcina intambo
Intambo yokubamba umlilo egcina intambo ihlala yenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zomlilo kunye neplastifier. Inokwenza umlinganiso ofanayo kunye nokuxinana kwesiponji xa kugalelwa umlilo. Inokuthintela ngokufanelekileyo kunye nokuvimba ukusasazeka nokusasazeka kwelangatye kwaye ikhusele iingcingo ...